Tọgbọ na Catalonia ebe, kpọmkwem na ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ Mediterranean nke Spain, Barcelona bụ obodo nke abụọ kacha buo ibu na Spain, na otu n'ime ndị kasị ama ebe maka njem na Europe Travel N'oge The Spring. Barcelona bụ ihe na-akpali crossover nke incredibly ochie ụkpụrụ ụlọ bara nnukwu uru na n'oge a haziri. Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye ofufe nke Gaudi ije, -abịa ebe a na-ele alluring Sagrada Familia, Casa Batllo, na Güell Park. Barcelona na-emekarị ọkụ nile n'afọ, na ị nwere ike ịga nke a njem nleta friendly obodo n'oge ọ bụla nke afọ.
I nwere ike ịma na Bruges, Belgium, na-akpọ “broozh,” ma ọtụtụ, na dike nke “na Bruges” ihe nkiri, -eme bụghị. Ha bụ ndị Dublin, ziga ya ebe ahụ ha boss maka izu abụọ mgbe a hit na-aga na-ezighị ezi. Otu bụ a na-eto eto hothead onye na-ahụ enweghị ihe ha ga n'ebe ọ bụla ma Dublin; nke ọzọ, okenye, nro, ọzọ ọchịchọ ịmata, aka ekedep a akwụkwọ ntuziaka na ọkwa: “Bruges bụ ihe kasị mma-echebewo ochie obodo na Belgium!”
eji bụ abụọ pụrụ iche n’afọ niile! N'ịbụ n'etiti France na Spain, obere obodo a maara nke ọma maka mmetụta siri ike n'obodo abụọ wetara, culminating aha ọjọọ biya na chocolate. Yana Paris, Prague, na Budapest, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya obodo na Europe jupụtara ọwa mmiri na ndị agadi ochie ụlọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)